Ọ fọrọ nke nta ka Nna Day! Etufuru m Pops afọ ole na ole gara aga, yabụ wepụta oge makụọ papa gị ma zụtara ya onyinye… ọbụlagodi na ọ bụ naanị ego ole na ole. Ọ ga-ahụ ya n’anya ọ bụrụgodị na ọ naghị egosi ya. Nke a oge nke afọ m na-ahụ onwe m na Lowes anya na jụụ ngwá ọrụ na m na-eche nnọọ maka a gbawara n'etiti abụọ… “Aga m na-jidere otu n'ime ndị n'ihi na papa m” na mgbe ahụ ka m na-echeta na ọ bụghị na anyị ọzọ. 🙁
A bịa n’inyocha nkwenkwe na omume ịzụ ahịa nke ndị otu ahịa dị iche iche, ndị na-ere ahịa na-elegharakarị ndị nna anya. Ọtụtụ na-eche na ụmụ nwoke bụ ndị nna na-eme omume yiri nke ndị na-abụghị nna, ma ọ bụ na ha na-eji echiche mgbe ochie nke ndị nna mgbe ha na-amụ ozi ha. Agbanyeghị, ndị nna nke oge a nwere nkwenye doro anya doro anya gbasara ọrụ ha, omume iche iche ha, na ndị maara ihe nke ọma.